Iyo 10,5 "iPad Pro ingaite kunge maviri maPad Mini akaiswa padivi nepadivi | iPhone nhau
Jose Alfocea | | iPad Pro, Noticias
Kune atove mazhinji makuhwa ekuti, kwemwedzi, inongedzera munzira iyo Apple iri kushanda kwete chete pane iri kuuya yekuvandudza yeiyo iPad renji, asiwo pane nyowani iPad Pro modhi iyo skrini ingave yakatenderedza 10,5 inches. Nekudaro, kunyange hazvo runyerekupe nekudonha zvichinongedza munzira iyoyo, kune maonero akasiyana siyana maererano nehukuru chaihwo hwaingave nahwu Apple piritsi.
Zvino, dhizaina anonzi Dan Provost atora ruzivo rwese rwuripo, akaita kuverenga kwake, uye asvika pamhedziso yekuti, sekureva kweMacRumors, "zvine musoro": iyo nyowani 10,5-inch iPad Pro ingave yakaenzana neayo maviri iPad Mini akaiswa padivi padivi, iine screen resolution imwechete seiyo 12,9-inch iPad Pro, uye imwechete pixel-per-inch density seiyozvino Mini Mini.
1 Iyo iPad Pro ingaite sekunge uine maviri maPad Mini mune imwe
2 Runyerekupe rwekare
Iyo iPad Pro ingaite sekunge uine maviri maPad Mini mune imwe
Studio Akanaka dhizaina Dan Provost, yakaburitsa a chinyorwa chinonakidza iyo yatove yakanzwikwa nevekuAmerican midhiya, uye maanotaura nezve fungidziro inotevera 10,5-inch iPad Pro, achijekesa musanganiswa wekare makuhwa: "Masvomhu ake akasimba uye nharo dzake zvine musoro"anodaro Juli Clover weMacRumors.
Apple paakafumura iyo 12,9-inch iPad Pro mukupera kwa2015, Phil Schiller, mukuru weApple wekushambadzira, akatsanangura chikonzero nei kambani iyi yakanga yasarudza saizi yakadaro, uye kwete imwe. Sekureva kwemukuru akati, Hupamhi hweiyo 12,9-inch iPad Pro yaienderana nekukwirira kwazvino 9,7-inch iPad, saka kuve ne12,9-inch iPad Pro kwaive kwakafanana chaizvo nekuve nemaviri 9,7-inch iPad zvishandiso masendimita akaiswa padivi nepadivi..
Aya ndiwo maratidziro angaita 10,5 ″ skrini pane muviri wakaenzana saizi kune yazvino 9,7 ″ iPad Pro | MUFANANIDZO: Dan Provost
Kubva pamafungiro aPhil Schiller iye, Dan Provost akataura mune yake chinyorwa kuti iyo upamhi hwe10,5-inch iPad yaizoenderana nekukwirira kweiyo iPad mini's skrini, kuitira kuti nyowani 10,5-inch iPad Pro ingave yakafanana nekuve nemaviri ePad minis akaiswa padivi padivi. Uyezve, anodaro, iyo 10,5-inch iPad yaizopa resolution imwechete seye 12,9-inch Pro modhi, uye neiyo yakafanana pixel density seiyo iPad mini.
Masvomhu anoshanda zvakakwana. Iyi nyowani 10.5 ″ iPad ingadai iine resolution imwechete seye 12.9 ″ iPad Pro (2732 x 2048), asi pikisi imwechete seye iPad mini (326 ppi panzvimbo ye264 ppi). Iwo manhamba anozvitaurira ivo, [ingo] ita diki Pythagorean theorem, uye iwe unoguma uine 10,5 ″ diagonal screen (10,47 ″ kuti ive chaiyo, asi hapana imwe yeApple saizi saizi yakataurwa iri chaiyo). Panyaya yemipimo yemuviri, hupamhi hweiyi 10.5 ″ skrini ingave yakafanana chaizvo nekukwirira kweiyo iPad mini skrini.
Tikatarisa kumashure tinozozviona runyerekupe rwese rwakanzwika nezve iyi nyowani iPad inotaura nezve skrini ine saizi inopfuura gumi inches. Muchokwadi, takaverenga makuhwa anotangira pa10,1 inches kusvika 10,9 inches, "zvichiratidza kuti Apple inogona kunge ichiedza prototypes akati wandei," vanodaro kubva kuMacRumors.
Iyo yeJapan webhusaiti Mac Otakara yakaburitsa maviri akapatsanurwa mishumo, imwe ichitaura 10,1-inch piritsi, uye imwe ichiratidza kuti iyo skrini yaizosvika 10,9 inches. Kune rimwe divi, "zviwanikwa zveTaiwanese zvekutengesa" zvinoratidza 10,5-inch screen.
Ming-Chi Kuo, anozivikanwa muongorori weKGI Securities anoziva zvese, akatanga kutaura nezve 10,5 inches, asi achangobva kutsigira muchikamu uye akadzikisa fungidziro yake nekunongedza saizi iri pakati pe10 ne10,5 inches.
Zviripachena kuti hazvisati zvichikwanisika kuve nechokwadi chekuti saizi yeiyo nyowani iPad Pro ichave (haigone kutovimbiswa kuti ichave iripo), asi mushure mekufunga uku 10,5 ″ iPad Pro inoita kunge saizi inonzwisisa zvakanyanya, iyo inokwana zvakakwana mumhuri yemapiritsi eApple, uye kuti nekushinga kwakawanda takamirira vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo 10,5 ″ iPad Pro ingaite kunge maviri maPad Mini akaiswa padivi padivi
Snapchat inotangisa kutsvaga kunodiwa kwese kwese kuti tirege kuenda kumakwikwi